पहिलाे पटक कसरी चोरी भएको थियो विमानस्थलबाटै प्लेन ? « Janata Samachar
पहिलाे पटक कसरी चोरी भएको थियो विमानस्थलबाटै प्लेन ?
काठमाडौं । विमानस्थलमा कसैको सामान चोरी हुनु, हराउनु वा छुट्नु सामान्य हो । तर कहिलेकाँही विमानस्थलबाटै प्लेन चोरी भएको घटना सुनिन्छ । विमानस्थलबाटै प्लेन चोरी कसरी सम्भव छ ? यो सबैलाई अनौठो लाग्ने कुरा हो । तर यो सम्भव छ र विश्वमा यस्ता घटना घटेका पनि छन् ।
सन् २००३ मा इतिहासमै पहिलो पटक विमानस्थलबाटै प्लेन चोरी भएको थियो । विमानस्थलमा पार्किङ गरेर राखिएको बोइङ ७२७ जहाज चोरी भएको हो । जुन अहिलेसम्म पनि के भयो भन्ने कुरा पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
सन् १९७५ मा अमेरिकन एयरलाइन्स बोइङ ७२७ बनाइएको थियो । २५ वर्ष अमेरिकाले प्रयोग गरेपछि यसलाई अंगोलियाले खरिद गरेको थियो । पुरानो भइसकेको यो जहाज अंगोलियाले यात्रु बोक्नका लागि नभएर इन्धन बोक्न प्रयोग गर्यो । रोडबाट इन्धन नपुग्ने ठाउँमा जाहाजले इन्धन पुर्याउने काम गर्थे । पछि नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको यस जहाजलाई विमानस्थलमै पार्किङ गरेर राख्न थालिएको थियो ।
कसरी भयाे चाेरी ?
क्वाट्रो एयरपोर्टमा पार्किङ गरेर राखिएको यो जहाज १५ महिनापछि एयरपोर्टबाटै चोरी भयो । सन् २००३ मे २५ का दिन साँझ ५ बजे दुई जना मानिस प्लेनमा चढे । एक जना अमेरिकाका पाइलट थिए भने अर्को जना फ्लाइट इन्जिनियर थिए । उनीहरु प्लेन चलाउन योग्य थिएनन् त्यहि पनि बोइङ ७२७ चलाउन तीन जना पाइलटको आवश्यकता पथ्र्यो ।
उनीहरुले लाइट अन नगरि प्लेनको इन्जिन अन गरे । एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरले कुन प्लेनको इन्जिन चल्दैछ भन्ने कुरा शुरुमा थाहा पाएनन् । एटिसिले बोइङ ७२७ को इन्जिन चलेको थाहा पाउँदासम्म जहाज रनवेतर्फ लागिसकेको थियो ।
उनीहरुले पाइलटसँग सम्पर्क बढाउन खोजेपनि सकेनन् । प्लेनलाई टेकअफ गर्न स्वीकृति दिइएको थिएन् तर प्लेन धवनमार्गमा गुड्न थाल्यो र टेकअफ गर्यो र साउथ वेस्टतर्फ अघि बढ्यो । हेर्दाहेर्दै प्लेन एटिसि र स्ट्याटलाइटबाट समेत सम्पर्कविहीन भयो । जहाज पत्ता लगाउन अनेक माध्यमबाट अनेक उपाय लगाए पनि आजसम्म यो जहाज कहाँ पुग्यो, कहाँ के भयो भन्ने कुरा पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
‘ताउ ते’ आँधीका कारण भारतका डेढ लाख मानिस विस्थापित
कर्नाटकमा ५ जना, गोवामा २ जना , तमिलनाडुमा २ जना गरी केहीकाे मृत्यु आँधीका कारण
कोरोनाभन्दा खतरनाक ‘ब्ल्याक फंगस’ भाइरसको संक्रमित बढ्दो, ६ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको महामारी खेपिरहेको भारतको विभिन्न राज्यमा अर्को डरलाग्दो भाइरसको संक्रमण पाइएको छ
भारतको विभिन्न राज्यमा चक्रवात आँधी, चार जनाको मृत्यु
काठमाडौं । भारतको विभिन्न राज्यमा चक्रवात आँधी ताऊ तेका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ ।